Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy S3 ilaa Android 5.1.1 | Androidsis
Qoraalka soo socda, iyadoo aan loo eegin inta saaxiibadood Samsung ah inay kaliya ujeedo u yihiin iibinta terminaalka cusub ee Android iyaga oo aan dan ka lahayn adeega iibka kadib ee ay siiyaan dadka isticmaala ee si indho la’aan ah ugu kalsoonaaday markay helayaan terminal cusub oo Android ah, waxaan u barayaa iyaga oo mahadsan shaqada oo ka imanaya horumariyayaal madaxbannaan sida kooxda Remix Remix, sida saxda ah ee cusbooneysii Samsung Galaxy S3-gaaga Android 5.1.1 Lollipop.
Haddii aad si sax ah u maqashay, uma baahnid inaad dib ugu celisid cinwaanka maqaalka marar badan ama aad indhaha xoqdo adigoo u maleynaya inay taasi tahay riyo. Thanks to horumarka firfircoon ee dad badan, maanta waxaan kuu sheegi karaa in Samsung Galaxy S3, moodal GT-I9300, waxay u socon kartaa si dhammaystiran waxa taariikhda ah waa nooca rasmiga ah ee ugu dambeeyay ee Android. Marka waad ogtahay, hadaad rabto ku cusbooneysii Samsung Galaxy S3-kaaga Android Lollipop 5.1.1, dhagsii «Sii wad akhrinta maqaalkan» tan iyo markii aan kuugu sharaxayo talaabo talaabo, anigoo si faahfaahsan oo faahfaahsan u lifaaqaya dhamaan faylasha lagama maarmaanka ah iyo casharrada si habka cusboonaysiinta uu u noqdo mid fudud oo cad intii suurtogal ah.
1 Astaamaha Remote Remix Android 5.1.1 Lollipop rom
4 Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 5.1.1. Nacnac talaabo talaabo ah
5 Cusboonaysii habka haddii aan horeyba ugu jirnay qaabkii hore ee Qiyaamada Remix Lollipop.
Astaamaha Remote Remix Android 5.1.1 Lollipop rom
La Rom Qiyaamaha Remix Lollipop ku faani karaa noqo mid kamida kuwa ugu dhameystiran Android 5.1.1 ROM-yada horumarkiisa, oo waa noocaan wax laga beddelay ee Android 5.1.1 oo si dhammaystiran loogu habeeyay Samsung Galaxy S3 wuxuu ku saleysan yahay shaqada Roms kale oo badan oo isku daraya kuwa ugu fiican dhammaantood hal. Marka waxaan dhihi karnaa Remix Remix waxay ku saleysan tahay cyanogenmod, AOKP, paranoidroid, OmniRom iyo xataa Caato Rom.
Hayso Samsung Galaxy S3, moodel caalami ah GT-I9300 taas oo waliba ay tahay inay noqoto Xidid iyo haysashada Soo-kabashada la beddelay.
Dib-u-habeynta ha la beddelo la cusbooneysiiyay qaabkeedii ugu dambeeyay ee la heli karo.
Hayso kayd, Nandroid backup dhammaan nidaamka qalliinka hadda jira.
Dib loosoo celin karo gurmad dhammaan barnaamijyada iyo xogta maadaama howsha cusbooneysiinta aan waayi doonno.
Faylasha loo baahan yahay waxay ku xadidan yihiin laba feylood oo isku tiftiran qaab zip, oo aan ku qasbanaan doono soo dejiso oo nuqul ka samee xusuusta gudaha ama dibedda ee Samsung Galaxy S3 iyada oo aan hoos loo dhigin:
Rom Dib u Soo Celinta Remix V5.4.0 Android 5.1.1. Nalalka loogu talagalay Samsung Galaxy S3 GT-I9300.
Gapps Android 5.1.1 hurdiga ah.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 5.1.1. Nacnac talaabo talaabo ah
Marka dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka ah la buuxiyo, faylasha la soo dejiyey oo la soo guuriyey iyadoon hoos loo dhigin Samsung Galaxy S3 ee aan rabno ku cusbooneysii hab rasmi ah oo rasmi ah Android 5.1.1 Lollipop, Waxaan geli doonaa qaabka soo-kabashada oo waxaan u socon doonnaa sida soo socota:
Nadiifi oo buuxa: Waxaan galnaa xulashada Wipe iyo waxaan u fulinnaa Masax dhammaystiran rakibidda sida ugu macquulsan, si macquul ah Tirtiridda kaliya ee ay tahay inaanan sameynin waxay noqon doontaa mid u dhiganta xusuusta gudaha ama dibedda waxay kuxirantahay halka aan martigelinay faylasha lagama maarmaanka u ah ifinta Rom.
Waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib oo waxaan dooranay Zip-ka Rom-ka waxaanan xaqiijinaynaa biligleynteeda.
Waxaan ku laabaneynaa xulashada Ku rakib oo markan waxaan shidnaa sibilka Gapps Android 5.1.1 ..
Ugu dambeyntii waxaan dooranaynaa ikhtiyaarka Dibudhiska Nidaamka Hadda.
Cusboonaysii habka haddii aan horeyba ugu jirnay qaabkii hore ee Qiyaamada Remix Lollipop.
Haddii aad horey ugu jirtay a nooca horudhaca ah ee Remix Remix Remix, habka cusbooneysiinta nooca ugu dambeeya ee la heli karo wuxuu ku eg yahay, ka soo kabashada, raac tilmaamayaasha biligleynaya:
Waxaan u aadnay ikhtiyaarka rakibidda oo aad u iftiimineysaa Rom iyo Gapps.
Masax kaydka iyo tirtir kaydka dalvik.
Dibudhiska Nidaamka Hadda.
Nidaamkan, Rom-ka waxaa loo cusbooneysiin doonaa nooca ugu dambeeya, iyadoo la ilaalinayo dhammaan codsiyada iyo xogtayada.
Sawirro dheeraad ah halkan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo cusbooneysiiyo Samsung galaxy S3 ilaa Android 5.1.1
Guillermo Noqo dijo
Iyo xiaomi redmi note 4g. Weli lama cusbooneysiin karo sax?
Jawaab Guillermo Be
Waxay ku jirtaa v5 xilligan
Waad ku mahadsan tahay, casharro kasta oo halkaa ka jira oo ku saabsan sida loo rakibo?
Ma u baahan tahay wax ka badan saaxiib Guillermo Be
haha maya, mahadsanid, wali waxaan raacayaa kanaalkaaga youtube
Way fududahay sida soo dejinta Rom-ka, aadista cusboonaysiinta, adigoo gujinaya menu-ka ugu sarreeya iyo xulashada Romka xulashada xirmada cusbooneysiinta.
Waxay noqon doontaa in roomaani uu ku shaqeeyo s3 SGH-I747M ama galaxy s3 lte
Ku jawaab tatus matias
Jose جوزيه (@AbdihakimAinte) dijo
Galab wanaagsan, salaan ka timid Mexico, hal su'aal, oo loogu talagalay Samsung SM-G357M Samsung, ma heleysaa cusbooneysiinta?
Jawaab Jose جوزيه (@Joe_Squire)
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalka. Waxaan rakibay maalmo kahor, laakiin maheli karo wado aan kusii cusbooneysiiyo. Waxba kama heli karo menu-dejinta. Wax talo bixin ah?
Ku jawaab Emil
Waxaan isku dayay shalay, waxay ahayd inaan tirtiro oo aan rakibo ROM-ka dhowr jeer (markii ugu horeysay ee aan rakibo waxay i siisay xiritaan) laakiin markii labaad wax walba way fiicnaayeen waxayna ku shaqeynayeen dhibaato la'aan. Bilic ahaan waxaa jira wax badan oo horumar ah, oo aad u fiican. Intaa waxaa dheer, labadaba ROM iyo Lollipop labaduba waxay bixiyaan goobo badan iyo xulashooyin habeyn ah.
Marka la eego waxqabadka, barnaamijyadii markii hore ii yara caddaalad ahaan jiray, illaa xadka la isticmaali karo (Falanqaynta Muhiimka ah ee 3 tusaale ahaan) hadda waxay u shaqeeyaan si dheellitiran. Ma dhihi doono way qumman tahay, laakiin way ka sii fiicantahay. AnTuTu waxay siineysaa dhibco dhan 25000 dhibcood (iyadoo Android Slimrom 4.4 ay siisay qiyaastii 19000), in kastoo aan ku kalsoonahay waxqabadka barnaamijyada wax ka badan waxa tijaabooyinka ay sheegaan, oo aadan waligaa ogaan karin inay kalsooni leeyihiin iyo in kale.
Marka la soo koobo, waqti yar oo la isticmaalo laakiin dareen aad u wanaagsan oo leh noocaan ah android. Hadday xasilloon tahay, waan sii hayn doonaa. Hadaanay ahayn, waxaan ku noqon doonaa Slimkat, oo sifiican usocotay
Ku jawaab miguelhd
King Bantha dijo
Miyaad i siin kartaa tilmaan sidaad u sameysay? Hadda waxaan haystaa Galaxy s3 oo loox la leh animation bilawga ...
Waad ku mahadsantahay horay iyo tan ugu wanaagsan ...
Jawaab Bantha King
Marka ugu horeysa ee aad bilowdo waxay qaadan kartaa waqti dheer, taasi waa, maahan loop, laakiin waxay qaadan kartaa shan daqiiqo in la bilaabo ... hadii kale, isku day inaad dib u rakibto ROM, ama, wixii aan sameeyay (waxay i siisay a xawaaladaha waxaanan aqriyay inay ahayd inuu ka bilowdo Samsung ROM, markaa waxaan dib u soo celiyay Samsung 4.3 stock ROM ka dibna waxaan ku rakibay Remix Remix)
Hadda waan rakibay oo waxay u socotaa sida soojiidashada, hal su'aal baan qabaa….
Muxuu astaamaha daaqadaha u muuqdaa?
Xagee kahelaa mawduuca darckRed?
Jawaab Williams Leyva
Sideen uga dhigaa mid u eg Samsung S5 ama ka sareeya?
Jawaab ku sii Cristina Mejía
Subax wanaagsan, waxaan hayaa qaabka gt-i9300 oo taleefankayga gacanta ayaa laga sii daayay warshadda, waligay ma xididdegin ama wax ma jiraan oo tan iyo intii aan sii joogo Android 4.3 waxaan jeclaan lahaa inaan cusbooneysiiyo 5.1 laakiin wax fikrad ah kama haysto tillaabooyinka ugu dambeeya sida loo sameeyo, ma heysatid wax fiidiyow ah ama xiriiriye ah oo aan kugula socdo YouTube ama sida loo sameeyo waan ku qanacsanahay jawaabtaada iyo dulqaadkaaga mahadsanid
Ku jawaab rays
weydiin Waxaan horeyba u rakibey wax walba dhibaato la'aan laakiin tan iyo markii aan xidid ku noqdo qolkaan waxaan kuhayaa ... iyo codsi noocee ah ayaan kala soo bixi karaa raadiyaha, ROM aad u dhaqso badan
Fran Golden dijo
Aad u fiican, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii cusbooneysiintani u shaqeyso galax s3 Neo sidoo kale.
Haddayna ahayn, haddii aad taqaanno qaab kasta oo lagu gaaro?
Ku jawaab Fran Dorado
Hal su'aal, ma u shaqaysaa samsung s3 mini GT-I8190L?
Waxaan ku sii jirayaa 4.1.2 jellybean oo waxaan doonayaa inaan cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeya, waa maxay?
Galab wanaagsan, cusbooneysiinta noocani waxay beddeleysaa modemka (base band).
Juanma Mendez sawir-haye dijo
Subax wanaagsan ... Rakibaadda ROM-ka aad ayey u fiicneyd laakiin waxaan dhibaato ku qabaa gapps-ka ... Waxay i siineysaa rakibidda xaalad qalad ah oo la soogaley
Jawaab Juanma Mendez
Dhibaato isku mid ah ayaan ka qabaa rakibaadda oo laga gooyay gapps-ka
Waad salaaman tahay, waxaan u isticmaalay Gapps of Paranoid Android nacnaca 5.1 micro-ka aan isticmaalo; Waxaan ka helay halkan: http://www.androidrootz.com/2015/03/download-android-51x-lollipop-pa-gapps.html
1. Marka hore, codsigii waraaqaha ayaa istaagay.
2. Wax walbo mar labaad dib u dhig kumana joojineyso xaqiijinta isku xirnaanta ka dib markii aad xiriiriso WiFi ..
Khaladka Gapps. Xaaladda qalad 7. Xal kasta oo jira?
Miguelhd, maalin wanaagsan, qolka ayaan dhex dhigay, wax walbana waa hagaagsan yihiin, kaliya 3g ma muuqato, haduu qabto 2g, laakiin 3g, maxaan sameyn karaa, horeyna qolka ayaan dhowr jeer u geliyay raadiyahana waa baaba'ay, dheh aniga sida aan u xaliyo
saaxiibo aad u fiican, waad ku mahadsantahay romka waxwalba waan ku sameeyay warqada ma aanan soo bandhigin wax fashil ah tan iyo casharadii kale waligey kuma cusbooneysiin karo lolipop 5.1 Waan ku faraxsanahay !!! Kuma soo bandhigi karo wax guuldaro ah wifi ama 3g ama gapps oo lagu tijaabiyey samsung s3 i9300 salaan! iyo mahadsanid
haa, laakiin ma lahan raadiye iyo ps waxaan adeegsanayay muddo bil ah waana xasilooni yar
ma noqon kartaa i9305?
Waxay khuseysaa qaabka SGH-I747
Jawaab ISAI PINEDA
Waad salaaman tihiin, codsi kaamerada waxbadan ayuu xirayaa iyo bluutooska gaariga leh iyo dhago furan oo gacmaha lagu xiro, waa wax aan macquul aheyn in laga hadlo buuqa jira, waa wax laga xishoodo waana sababta ay tahay inaan dib ugu noqdo ...
Iima furi doonto Gapps-ka.
Ku jawaab shokyllanos
Waad salaaman tahay waxaan doonayay inaan wax ku weydiiyo, markii aan biligleynayo ROM-ka wax walbana waa fiican yihiin. Oo markaan wax walba u habeeyo sidoo kale.
Dhibaatada kaliya ayaa ah in aanan mar dambe haysan rukhsad adeegsi super. Ma iga caawin kartaa sida loo rujin? Xq ma heli karo wax xal ah. Laga soo bilaabo mar hore aad ayaad u mahadsan tahay!
Astaanta daaqadaha, runtii?
Xidhiidhka GAPS ayaa hoos udhacay, fadlan dib-u-hawlgeli xiriiriyaha, maanta nidaamku ma dhameystirna. Salaan!
Jawaab Javier Chacón
Waxaan ubaahanahay xal GAPS! Waxay i siineysaa rakibida xaalad qalad ah oo la joojiyay 7. Necisto ayaa caawisa maadaama aanan xallin karin.
canada edgar dijo
Iga raali noqo, waxaan ku rakibay samsung galaxy s3 i9300 oo wuu damiyaa markaan waco, sidoo kale markaan fariin u dirayo, ma arki karo fariinta la soo diray.
Ku jawaab edgar cano
Subax wanaagsan waxaan hayaa Samsung S3 (SGH-I747) si aan ugu soo raro nidaamka qalliinka Maxaan sameeyaa? Hadaad ii qori laheyd emaylkeyga waan ku qanacsanahay maadaama aanan laheyn salaan internet
Ma loo isticmaali karaa s3 neo duos (i9300i)?
isku xirka labaad wuxuu bixinayaa qalad bogga lama heli karo
Mahadsanid !! Waxaan ku socday kun yaabab. Waxaan leeyahay S3 I9300 caalami ah, waxaan ka bilaabay JB 4.3 Stock of Claro AR. Uma baahnid inaad soo celiso EFS ama Modem. Waxa raadiyaha iila muuqda muhiim iguma aha; in kasta oo aan halkaas ka akhriyay goob ay ku taal apk-ga ayaa lagu xalliyaa (aniga ahaan waxaan ku dhawaadaa inaan isticmaalo BT-ga dhegaha, markaa waligay ma isticmaalin). Waxaa habboon in la caddeeyo in waxqabadka si weyn loo hagaajiyay, xiritaanna lahayn, isticmaalka batteriga ayaa la hagaajiyay, soo dhaweynta WIFI iyo 3G-2G signalka ayaa la hagaajiyay laba jeer (sababtaas awgeed ayaan u iftiimiyay qaybtan la igu taliyay saaxiib, tan ka hor xogtaydu waxay u dhexaysay 2 daqiiqadood oo aad uga gaabisay)
Waad salaaman tahay, waxaan raacay talaabooyinka sida lagu sharaxay casharka oo si buuxda ayaa loo rakibay laakiin hadda ma haysto shabakad, ma wici karo ama ma soo wici karo ama ma diri karo sms ama ma isticmaali karo xogta moobiilka ... wax talo bixin ah? Mahadsanid
Jawaab Catril Pacheco
George Mora dijo
Mahadsanid, waa wax fiican! Waxaan dhibaato ku qabaa WhatsApp. Way rakibtaa laakiin ima soo dirto lambarka xaqiijinta maxaa yeelay waa xidid. xal kasta oo macquul ah?
Jawaab Jorge Mora
Salaan. Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waan ka xumahay waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo taleefankayga casriga ah labadaba tilmaamayaashaada iyo boggag kale oo la soo jeediyay mana aanan helin wado wali tan iyo markii aan rakibayay wax walba oo aan isku dayo inaan ka rakibo qalabka dejinta ayaa iga tuuraya qalad. maxaa dhacaya? marka hore, Mahadsanid.
Waad salaaman tahay dhibaato ayaan qabaa. Waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan, laakiin taleefankayga gacanta ma sii ruxayo wax kastoo dhaca. Qof ayaa i caawin kara?
Waan ka xumahay waxay la shaqaysaa samsung Galaxy S3 Neo Duos GT-i9300i
Ku jawaab enstor
Waad salaaman tihiin, ROM-kayga waxaan ku rakibay GT-I9300-kayga waana la wacay! hadda way ka badan yihiin sidii markii aan sameeyay qaabeynta bilowga ah. Ma noqon kartaa dhibaato Gapps ah? Salaan
Galab wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ROM-kan uu u shaqeeyo Samsung GT-I9300 laakiin lama sii daayo, wuxuu ka yimid Movistar Venezuela laakiin waa nooca saxda ah ee GT-I9300. Fadlan haddii qof iiga jawaabi karo.
Ku jawaab Gabriel Atencio
Wanaagsan waxaan ubaahanahay caawimaad kaliya waan rakibay waxayna socotaa daqiiqad waxayna kusoo noqotaa astaanta markalena way shidan tahay
Jawaab Abiel fernandez
Subax wanaagsan, su'aal ka dib markaan xididdada u dhigo 5.1 rakibaadda, ma u baahanahay micro SD? Maaddaama S3-kayga weyn uu leeyahay 16 GB oo xusuusta gudaha ah laakiin sida u dhexeysa tallaabooyinka loogu rakibayo qaabeyntaas, ma aqaano inay tirtiri doonto markay ku jirto xusuusta gudaha taleefankayga, qof ayaa i caawiya fadlan! Waxaan rabaa inaan ka baxo versionkan 4.3 oo ah wax karaahiyo ah
Ku jawaab Vircuemol
Miyay Android ka shaqeyn doontaa Venezuela?
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, waxaan akhriyay in romkaanku yahay S3 GT-i9300 waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay u shaqayso sidoo kale nooca S3 GT-i9305 ee Maraykanka, in kastoo aan ku noolahay Spain Qof ma ii sheegi karaa haddii aan ku isticmaali karo my GT-i9305? waa inaanan ku dhicin inaan rakibo anigoon ogeyn inuu la jaan qaadayo moobilkeyga runtiina waxay tahay wixii aan aqriyay waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo romkaankan. Waad ku mahadsan tahay horay iyo salaan dhammaan.
Ku jawaab Leugim
Saaxiib waxaan leeyahay sansung sch-i535 waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo sidaan yeelo waxaad cashar iigu soo diri kartaa emaylkeyga mahadsanid
Ku jawaab Rafael cv
Haye, waxaan dhibaato ku qabaa shabakada, wax walbana si fiican ayey u shaqeeyaan, laakiin ma wici karo ama ma diri karo fariimo qoraal ah, ama internetka mobilada.
Jawaab Aldo Lopez Yapu
wuxuu u shaqeeyaa S3 neo duos version
Waad salaaman tihiin, horeyba waan soo degsaday wax walba laakiin ma aqaano sida loo bilaabo.
Jawaab Damian Paredes
Waxaan rakibay romka remix-ka raaxada laakiin gapps-ka igama qaado, waa til tilda oo aan ku rakibi karo s3 i9300
Codsiyada Claudio sidoo kale waa laalaadi lahaa ama la joojin lahaa, ka dib markii la rakibo wax walba, samee dib-u-warshadaynta taas, waan fiicanahay